आज मिति २०७८, वैशाख १९ गते आइतबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित) – Nepali news portal
आज मिति २०७८, वैशाख १९ गते आइतबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित)
१९ बैशाख २०७८, आईतवार ०८:४२ May 2, 2021 काठमाडौं डेष्क
मेष : पत्नीले तपाईंलाई खुशी बनाउन सक्छिन। विदेशी आफन्तले पठाएको उपहारले तपाईंलाई खुसी बनाउनेछ। तपाईंको प्रेमी जीवनले आज सुन्दर रूप लिनेछ। तपाईंले प्रेममा हुनुको स्वर्गीय भावना प्राप्त गर्नुहुनेछ। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। विवाह पछिको प्रेम गाह्रो झैं लाग्छ, तर यो दिनैभरि तपाईंलाई भइरहेको छ।
वृष : तपाईंको दिने मनोवृत्तिको फल प्राप्त हुनेछ किनकि तपाईं शंका, निराशा, विश्वासको कमी, लोभ, आसक्ति, घमण्ड र डाह जस्ता धेरै दोषबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। तपाईंमध्ये कसैले गहना वा घरको उपकरण खरिद गर्ने सम्भावना छ। आज तपाईंको धडकन आफ्नो साथीको प्रेमको संगीत तालमा लीन हुनेछ। पुरानो कुनै मित्रले तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछ र यस दिनलाई अविस्मरणीय दिन बनाउने सम्भावना छ। तपाईंको आजको दिन आफ्ना जीवनसाथीसँग प्रेम, चुम्बन, अंकमाल, र मजा गरेर रोमान्समा बित्नेछ।
मिथुन : आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ। कुराहरू नियन्त्रणमा राख्न आफ्नो भाइको मद्दत गर्नुहोस्। संघर्षलाई अनावश्यक तरीकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोस्, बरु तिनीहरूलाई सजिलै समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। मायामा डुब्नु आज तपाईंको लागि पाप हुन सक्छ, सावधान रहनुहोस्। केही कानुनी सल्लाह लिनको लागि वकीलसँग भेटघाट गर्ने राम्रो दिन। एउटा विनोदी छलफलमा पुरानो मुद्दा उठ्न सक्छ र यसले तपाईं दुई बीच तर्क उत्पन्न गर्दछ।
कर्कट : विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईंको भरोसा बढाउनेछ। आफ्नो ठूलो पार्टी सबैलाई लिनुहोस् – आज तपाईंसँग आफ्नो समूहको लागि कार्यक्रम संगठित गर्ने ऊर्जाको अतिरिक्त मात्रा हुनेछ। यात्राले मायाप्रिती फैलाउनेछ। तपाईंलाई सबैभन्दा गर्न मन लाग्ने कुराहरूको सामाजिकरण र पालनको लागि आज समय छ। आजको दिन ‘पागल हुने’ दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
सिंह : बच्चाहरुले तपाईंको साँझ रमाइलो पार्नेछन्। नीरस र व्यस्त दिनलाई बिदा गर्न एउटा राम्रो खाने योजना गर्नुहोस्। उनीहरूको भेलाले तपाईंको शरीरलाई पुन ऊर्जा दिनेछ। साथीहरू, व्यापार सहयोगिहरु र आफन्तहरूसँग आफ्नो चासोको रक्षा गर्नुहोस – किनकि तिनीहरू तपाईंको आवश्यकता अनुसारको नहुन सक्छन्। आज रोमाञ्चक दिन हुनेछ किनकि तपाईंले आफ्नो प्रियबाट उपहार / इनाम प्राप्त गर्नुहुनेछ। आध्यात्मिक गुरू वा बुजुर्गले मार्गदर्शन गर्नेछन्। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
कन्या : आफ्नो विचार व्यक्त गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। विश्वासको कमी हुन नदिनुहोस् किनकि यसले मात्रै तपाईंको समस्या जटिल हुनेछ र आफ्नो प्रगतिमा बाधा आउन सक्छ। आफैमा विश्वास गरेर पुनः आफ्नो मुस्कान पुन प्राप्त गर्ने र समस्या सल्टाउने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण राख्नुहोस् किनकि यसले तपाईंका हजुरबा हजुरआमाको भावनामा चोट लाग्न सक्छ। फतफताएर आफ्नो समय बर्बाद गर्नुभन्दा मौन बस्नु राम्रो हो। हामी समझदार गतिविधिहरुको माध्यमबाट जीवनको अर्थ दिन्छौं भनेर बुझ्नुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान राख्नुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तपाईंको वैवाहिक जीवनको कठिन चरण पछि यस दिन निवृत्ति प्रदान गर्नेछ।
तुला : आजको मनोरञ्जनमा खेल गतिविधिहरु र घर बाहिरका कार्यहरू समावेश हुनुपर्छ। अरू मान्छेको सुझाव सुन्ने र काम गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। व्यक्तिगत सम्बन्ध संवेदनशील र कमजोर छन्। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। आफ्नो जोडीले दिएको तनाउले गर्दा तपाईंको स्वास्थ्य नराम्रो हुन सक्छ।
वृश्चिक : अत्यधिक प्रभावशाली मान्छेको सहायताले तपाईंको नैतिकतामा ठूलो बढावा दिन्छ। तपाईँको आशा अनुसार पैसाको लाभ हुनेछैन। घरमा केही परिवर्तनले तपाईंलाई अत्यधिक भावुक बनाउनेछ – तर तपाईं प्रभावकारी ढंगले तपाईंको कुरा बुझ्ने मानिसहरूलाई आफ्नो भावना प्रकट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईं एक पटक आफ्नो जीवनको प्रेम भेटेपछि, अरू केही आवश्यक पर्ने छैन। तपाईंले आज यो सत्यको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई खिचलो बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू आउनेछन् र लामो अवधिसम्म पनि तपाईंको सम्बन्ध राम्रो नहुन सक्छ।
धनु : तपाईंले आफ्नो शारीरिक शक्ति कायम राख्न खेलमा आफ्नो समय बिताउने सम्भावना छ। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। तर्क र टकराव अनि अरूमा अनावश्यक दोष खोज्नेबाट बच्नुहोस। तपाईंको जीवन खुशी दिनाले र विगतका गल्तीका लागि क्षमा गर्नाले योग्य बनिदै जान्छ। कठिन समयमा आफ्ना जीवनसाथीबाट सहायताको कमीले तपाईंमा निराशा आउनेछ।
मकर : धेरै चिन्ता र तनाउले उँचो रक्तचाप हुन सक्छ। परिवारको समस्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तपाईंले यसको समाधान गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन किनभने एकपल्ट यसको समाधान भएपछि घरको माहौल सजिलो हुन्छ र तपाईंले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई प्रभावित गर्न कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। तपाईं प्रेममा बिस्तारै तर निरंतर जल्नु हुनेछ। तपाईंले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुसँग कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर दिनको अन्तमा तपाईंको जोडीले तपाईंलाई माया दिनेछन्।
कुम्भ : तपाईंको छिट्टो रिसाउने बानीले तपाईंलाई केही समस्यामा पार्न सक्छ। परिवारका सदस्य वा जोडीले केही खिचलो निकाल्नेछन्। आफ्नो प्रेमीको भावनात्मक माग पूरा गर्न हरेस नखानुहोस्। आफ्नो जोडीको अशिष्ट व्यवहारले आज तपाईंलाई केही कष्ट हुन सक्छ।
मीन : आफुलाई राम्रो बनाउन आत्म-सुधार परियोजनाहरुमा आफ्नो ऊर्जा प्रयोग गर्नुहोस्। मनोरञ्जन वा कस्मेटिक सुधारमा पनि धेरै खर्च नगर्नुहोस्। घरेलु काम गलाउने हुनेछ र यो मानसिक तनाउको लागि एउटा प्रमुख कारण बन्नेछ। तपाईंको जीवन खुशी दिनाले र विगतका गल्तीका लागि क्षमा गर्नाले योग्य बनिदै जान्छ। तपाईंले आफ्नो वैवाहिक जीवनका विवाहपूर्व, लखेटाई, र फकाउने आदि पुराना सुन्दर दिनहरूको सम्झना गर्नु हुनेछ।
कृष्णप्रसाद धमलाको नेतृत्वमा गठन भएको मञ्चप्रति विप्लव नेकपा ‘सकारात्मक’